Madaxweynaha Somalia oo Xalay Casho sharaf loogu sameeyay Garoowe+Sawiro – SBC
Madaxweynaha Somalia oo Xalay Casho sharaf loogu sameeyay Garoowe+Sawiro
Posted by Webmaster on April 29, 2013 Comments
Habeennimadii xalay Madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe waxa ka dhacday Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay taas oo casha sharaf loogu sameeyay wafdigiii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee xalay ku hoyday Caasimada Puntland.
Waxaa ka qeyb galay Xaflada cashasharafta ah madaxweyneyaasha Puntland iyo Soomaaliya Xasan Sheekh iyo C/raxmaan Faroole, Wafduudii ka socotay Dowlada Somalia ee uu horkacayay madaxweyne xasan iyo qaarkood golayaasha Dowlada Puntland.
Marti sharaf aad u tiro badan oo ajaaniib ay ku jirto, iyo weliba Fanaaniinta Hobolada Waaberi Puntland ayaa goobta sidoo kale ku sugnaa iyagoo halkaasi laga soo kala jeediyay Qudbado mujiim ah .
Wasiiro ka tirsan xukuumada Puntland, Xildhibaano iyo Waxgarad kale oo halkaasi ka jeediyay khudbado ayaa diirada saaray soo dhaweynta Wafdigan Madaxweyne Xasan Sheekh ee shalay yimid Garoowe iyagoo ugaga warbixiyay xaaladaha guud ee Puntland iyo horumarka ay hiigsaneyso.
Madaxweyne C/raxmaan Shekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa halkaasi ka jeediyay Qudbad isagoo marka hore soo dhweyn umuujiyay wadiga Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaa uu Dr Faroole halkaasi ka jeediyay qudbad taabaneysay dhinacyo b adan sida Horumarka, Nidaamka Xisbiyada badan ee Puntland, Amaanka, la dagaalanka Burcad badeeda iyo arimaha Federaalka.
Dr Faroole waxa uu sidoo kale sheegay in dowlada Puntland ee ka mid ka ah dowlada dhexe siweyn ula shaqeyneso dowlada Xasan Sheekh loogana baahanyahay dhinaceeda in xukuumadiisa ay la shaqeyso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasn Sheekh Maxamuud oo isna qudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay goobta ayaa ugu horeyn ugaga mahadceliyay Madaxda iyo shacabka Puntland sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen uuna uga mahadcellinayo.
Safarkiisa Xasan Sheekh ee Garoowe ayuu ku tilmaamay mid ku wajahan arimo badan oo ay ka mid tahay shirka London, wadatashiyo kala duwan oo dhinacyada Amaanka iyo horumarka dalka ah iyo arimo kale.
”Booqashadan iyo hadaladii laga jeedshay caawa meeshan waa mid xasuus gaar ah igu reebeysa” ayuu yiri Xasan Shiikh oo Somalida ugu baaqay iskaashi iyo isku dulqaadasho sidi loo gaari lahaa hanaan dowladnimo oo kala dambeynleh.
Hobolada Waaberi Puntland oo iyaa iyagu goobta ku soo bandhigay Bandhig faneed aad u xiiso iyo xamaasad badnaa kuwaas oo ay ku jireen heeso guubaabo iyo soo dhaweyn isugu jirtay laguna talagalay wafdiga Madaxweynaha Federaalka ee Garoowe soo gaaray.
Waxay Noqoneysaa Habeenkiisii ugu horeeyay Safarkiisii ugu horeeyay intii madaxweynaha loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud uu ku hoydo Magaalada Garoowe Caasimada Puntland.